मकैबालीमा फौजी किराको प्रकोप | Nagarik News - Nepal Republic Media
मकैबालीमा लागेको फौजी किरा ।
धादिङका विभिन्न ठाउँमा फैलिएको फौजी किराको प्रकोपले मकैबाली सखाप बनाएको छ । हुर्कदै गरेको मकै बालीमा किराको संक्रमण देखिएपछि किसानहरु चिन्तित बनेका छन् । जिल्लाको नीलकण्ठ नगरपालिका, सिद्धलेक, गल्छी, ज्वालामुखी, त्रिपूरासुन्दरी गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा लगाइएको मकै बालीमा फौजी किरा देखिएको हो । केही गोड्ने बेला र केही गोडिसकेका मकै कीराले खाएर नष्ट गरेपछि किसानहरु अन्यौलमा परेका छन् ।
लकडाउनका कारण मारमा परेका किसानहरु किराको संक्रमणले झनै चिन्तित बनेका छन् । मकै बालीबाट राम्रो आम्दानी लिने सोच बनाएका किसान फौजी किराको आक्रमणले गर्दा अनिकालले सताउने हो कि भन्ने चिन्तामा रहेको सिद्धलेक गाउँपालिका वडा नं १ जलकिनीका किसान बलबहादुर तामाङले बताए । ‘अघिल्लो वर्ष खडेरीले मकै खायो, अहिले पनि फौजी कीराले सताउन थालेको छ’, उनले भने, ‘तरकारी बारीमै कुहियो, मकैमा पनि रोग लाग्यो, यो बर्ष त अनिकालले सताउने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’
अमेरिकन फौजी किरा (फल आर्मीवर्म) मकैबालीमा लाग्ने पुतली समूहअन्तर्गत पर्ने किरा हो । यसको वैज्ञानिक नाम स्पोडोप्टेरा फ्र्युगिपेर्डा हो । अमेरिकी महादेशको उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्रहरूमा पाइने यो कीरा सन् २०१६ मा पहिलो पटक अमेरिकामा देखा परेको थियो । गर्मी महिनामा एक रातमै एक सय किलोमिटरभन्दा लामो यात्रा गर्न सक्ने यो मिचाहा कीरा पुतली समूहमा पर्छ र राति सक्रिय हुन्छ । बालीमा क्षति पुर्‍याउने चाहिँ कीराको लार्भाले हो । फौजी कीराको लार्भा धेरै खन्चुवा हुन्छ । मकैको पात, गुभो, जुँगा र घोगा समेत खाइदिन्छ ।
सिद्धलेक गाउँपालिकाका वडा नं १ र ६ मा फौजी किराको संक्रमण देखिएको छ । मकैमा किराको संक्रमण देखिएपछि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमनाथ सिलवाल, कृषि शाखाका प्रमुख छविलाल गुरुङ लगायतको टोली गएर अनुगमन गरी विषादी प्रदान गरेको छ । ‘त्यस ठाउँको १५ हजार हेक्टर भन्दा बढी जग्गामा लगाइएको मकै बालीमा रोग देखिएको छ,’ कृषि शाखाका प्रमुख गुरुङले भने, ‘हामीले दिएको विषादीले काम गर्‍यो भने मकै हुर्किन्छ नत्र किसानको मेहनत खेर जाने अवस्था छ ।’
यता गल्छी गाउँपालिका वडा नं. १ को कल्लेरीमा एक हजार दुई सय रोपनीको क्षेत्रफलमा रहेको कल्लेरीटार घर्तिटारमा गोडिसकेको मकैको विरुवाको गुभोमा किरा लागेको छ । दुई सय परिवारको बसोवास रहेको टारका अघिकांशको मकैबालीमा रोग देखिएको छ । यहि अवस्था रहिरहे मकै खाना नपाईने अवस्था रहेको किसानहरुको भनाई छ ।
सवै जसो किसानको मकैको विरुवामा किराको प्रकोप रहेको र त्यसको जानकारी कृषि ज्ञान केन्द्रमा पठाएको गल्छी गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक टिकाराम खतिवडाले बताए । कल्लेरी टारमा यस अघि धान वालीमा पनि समस्या देखिएको र वाली संरक्षण प्रयोगशालामा परिषण गराएर विषदी प्रयोग गरि केही हदसम्म नियन्त्रण गरिएको थियो ।
किराले बाली सखाप बनाएपछि विषादी छर्ने काम गरेपनि कमी नभएको गल्छी गाउँपालिका वडा नं. १ का किसान पुतली परियारले बताइन् । ‘दिउँसोभन्दा राति यो किराले धेरै बाली नष्ट गर्ने रहेछ, भोलिपल्ट भाँचिएको, किराले खाएर ढलेको देखिन्छ’, उनले भनिन्, ‘साना मकै त गुभोसम्मै खाएको छ, पुरै मकै बर्वाद पारिदियो, फौजी किरालाई विषादीमै डुबाएर राख्दा पनि किरा नमरेकोले झन् आतंकित बनेका छौँ ।’
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र काठमाडौंले फौजी किरा नियन्त्रणका लागि ३ प्रकारका विषादी सिफारिस गरेको छ । पानीमा घोलेर छर्ने एमामेक्टीन बेन्जोएट, स्पिनोसाड र क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल नामका विषादी सिफारिस गरे पनि किरा प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याउन नसकेको प्राविधिकहरु बताउँछन् । यो विषादी फौजी किराको लार्भा मार्ने हो, यसले मकै खाने लार्भा मात्रै मार्ने भएकाले वयस्क फौजी किरा मार्न फेरेमीन ट्याबको प्रयोग गर्न सकिने कृषि प्राविधिकहरु बताउँछन् ।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७७ १३:५९ शनिबार
मकैबाली फौजी किरा